Uyicwangcisa njani i-OBS yeTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyicwangcisa njani i-OBS yeTwitch?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 370
I-Twich kwasekuqaleni ihambile ne-OBS. Sichaza i-OBS yeTwich njengenkqubo evulekileyo yomthombo, amagama abo athetha ukuthi Vula umsasazi, apho ungabamba khona, xuba isandi kunye nevidiyo ngexesha lokwenyani, kunye nokusasaza nokurekhoda ngokuthe ngqo kwi-Intanethi.
Ukwenza okugqwesileyo Uqwalaselo lwe-OBS lweTwich kufuneka ubenayo uzinzo lwe-intanethi oluzinzileyo kunye nekhompyuter enenkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo kunye neemfuno ezisezantsi zesizukulwana sesithathu. Oku kuyakunceda ukucwangciswa kwe-OBS kweTwich ukusasaza umgangatho.
Kuya kufuneka wenze le nyathelo ngenyathelo.
Ngqamanisa i-OBS Studio kunye neTwich.
Cofa kwi "Inketho ekhuthaziweyo"
Cinezela iqhosha "Xhuma i-akhawunti, kucetyiswa"
Uyicwangcisa njani i-OBS ukuze uyihambise?
Yenza oku kulandelayo ngendlela elula:
Beka ibibrate ukuze idluliselwe.
Cofa ku "Yamkela"
Yintoni enokwenziwa kwi-OBS Studio
Yenza ubumbeko ukwenza usasazo.
Qhagamshela ividiyo kunye nesandi ngexesha lokwenyani kunye nomgangatho ophezulu.
Dibanisa isandi ngezihluzo zesiko
Jonga kuqala imithombo yakho kunye nezigcawu kuqala ngaphambi kokuba uphile.
Uyisebenzisa kanjani i-OBS Twich ukurekhoda isikrini?
Ukurekhoda kufuneka wenze oku kulandelayo:
Qwalasela ujongano lwe-OBS.
Yenza imeko emiselweyo kunye nemithombo kwi-OBS.
Jonga ukuBamba ukuBonisa okanye ukuThathwa kweScreen kwiLinux.
Jonga ukuba ijongeka kanjani
Khetha indawo oza kuyibeka kuyo le vidiyo.
Uyisebenzisa kanjani i-OBS Studio ukusasaza kuFacebook?
Qala icandelo kuFacebook.
Ngena kwiFacebook FanPafge.
Cofa ucofe iividiyo
Yiya kwilayibrari yevidiyo emva koko uphile.
Uya kufumana isitshixo sokudlulisa.
Kwicandelo lokumisela kunye nokukhupha kufuneka ukope kwaye uncamathisele "Isitshixo" kwi-OBS.
Ungayisusa njani i-lag kwi-OBS yeTwich?
Ukususa i-lag, kubalulekile ukwenza oku kulandelayo:
Qalisa i-OBS Twich.
Yiya kwi "Bit rate" ithebhu.
Zithobe ngesandla isantya sebhithi yevidiyo ngelixa urekhoda.
Qwalasela iAudio kwi-OBS yeTwitch
Ukuseta iaudiyo ngaphakathi I-OBS kwiTwich kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe Ikhowudi ye-AAC kunye nenqanaba elincinci lama-64 ukuya kuma-128 kbps.
Siza kukubonisa ezi ndlela zilandelayo zokumisela umsindo kwi-OBS kwi-Twich:
Izixhobo: Khetha imithombo yeaudio.
Isampulu yenqanaba: Oku kuxhomekeke kwinani leesampulu zomsindo ezithathiweyo ngomzuzwana, ukwenza isandi sibe sesokwenyani. Ukuphindaphindwa kwe-44.1Khz kuyacetyiswa.
Ubeka njani ukulibaziseka kwi-OBS yeTwich?
Yenza oku kulandelayo:
Cofa i icon yemenyu eyehlayo.
Vula imenyu oza kuyisebenzisa.
Unokukhetha ezimbini ongakhetha kuzo: "Ukubambezeleka okuqhelekileyo okanye ukubambezeleka okuphantsi".
1 Uyicwangcisa njani i-OBS yeTwitch?
2 Uyicwangcisa njani i-OBS ukuze uyihambise?
3 Yintoni enokwenziwa kwi-OBS Studio
4 Uyisebenzisa kanjani i-OBS Twich ukurekhoda isikrini?
5 Uyisebenzisa kanjani i-OBS Studio ukusasaza kuFacebook?
6 Ungayisusa njani i-lag kwi-OBS yeTwich?
7 Qwalasela iAudio kwi-OBS yeTwitch
8 Ubeka njani ukulibaziseka kwi-OBS yeTwich?
Abalandeli kwi-Instagram TIPS